मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अन्तिम तयारी, को को बन्दैछन् नयाँ मन्त्री ? – जनदिशा
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अन्तिम तयारी, को को बन्दैछन् नयाँ मन्त्री ?
Sahas November 13, 2019	No Comments
काठमाडौं । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सचिवालयमा कार्यरत सल्लाहकारहरुले सामुहिक राजिनामा दिए । प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न भन्दै उनीहरुले एकाएक राजिनामा दिएका थिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नयाँ ढंगले चल्न खोजेकाले सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै सचिवालय टिमका सदस्यलाई कात्तिक मसान्तदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै बसेको सचिवालय टिमको बैठकले राजिनामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरुलाई वर्खास्ती नगरी राजिनमा गराएर सहज परिस्थिति बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका सन्दर्भमा समेत त्यहि बाटो अपनाउन खोजेको दखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरुलाई राजिनामा गर्न लगाएर केही नयाँ र केही पुरानालाई समेत समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको गर्न लागेको बताईएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको थियो । यसअघि कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका केही मन्त्रीहरुलाई हटाएर नयाँ ल्याउने चर्चा चलेको थियो । राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै करिव आधा दर्जन मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी थियो । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली सबै मन्त्रीलाई राजिनामा गराएर नयाँ ढंगले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताईएको छ । केही मन्त्रीलाई मात्र हटाउँदा उनीहरुको व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको नयाँ विकल्पमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन् । नेकपाको पछिल्लो सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएर थप सहज बनाईदिएको छ ।
यी हुन् मन्त्रीको चर्चामा रहेका नेताहरु
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा नेकपाका प्रभावशाली नेताहरुको चर्चा छ । जसमा सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भूषाल, जनार्दन शर्मा र देवेन्द्र पौडेलको बढी सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ । त्यसैगरी घनश्याम भुषाल, प्रभु शाह र छविलाल विश्वकर्मा पनि पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा समेटिने पक्का जस्तै रहेको बताईएको छ । सरकारको आलोचकका रुपमा चिनिएका भीम रावलसमेत नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा समेटिन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार अग्नि सापकोटा, हरिबोल गजुरेल, लेखराज भट्ट, महेस बस्नेत पनि पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा पर्ने सम्भावना छ ।
उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई राजिनामा गराएर मन्त्री बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका उपेन्द्र यादवले राजीनामा दिए वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गर्ने तयारी रहेको स्रोतले बतायो । रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।
यी हुन् बिदाई पाउने मन्त्रीहरु
प्रधानमन्त्री ओली केही मन्त्रीलाई विदाई गर्ने मनस्थितिमा छन् । ती मन्त्रीहरुकै कारण मन्त्रिपरिषद हेरफर गर्नु परेको उनको बुझाई छ । त्यसैले खानेपानी मन्त्री विना मगर, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित, भौतिक तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, भूमिसुधारमन्त्री पद्म अर्याललगायत पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नपर्ने लगभग पक्का रहेको स्रोतले बताएको छ ।
Previous Previous post: अलिबाबाको एकै दिनको व्यापार ३८ बिलियन डलर भन्दा बढी
Next Next post: बंगलादेशका राष्ट्रपतिले प्रचण्डलाई भने-‘तपाइँ सुन्दर देशको सुन्दर नेता’